၂၀၁၉ ခုနှစ် နေအိမ်ဆေးရောင်တို့၏ လားရာ - Home Decoration | iMyanmarHouse.com
၂၀၁၉ ခုနှစ် နေအိမ်ဆေးရောင်တို့၏ လားရာ
14 Jun 2019 4:22 pm တွင် တင်ခဲ့သည်
1329 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ ပြီး
အိမ်သုတ်ဆေးထုတ်လုပ်သူများသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် အရောင်လားရာကို ခန့်မှန်းချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြ၏။
ယခုနှစ်အတွင်း ကြားနေအရောင်များ မြေစမ်းခရမ်းပျိုးကာလဖြစ်နေသည်။ မီးခိုးရောင်များမှာမူ ခေတ်ကျန်ခဲ့ပြီ။
မှုန်ပျပျ အပြာရောင်၊ အညိုရောင်နှင့် အနီမှိုင်းမှိုင်း အိမ်သုတ်ဆေးရောင်များ ခေတ်ထလာပြီ။
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် အကောင်းဆုံးအိမ်သုတ်ဆေးအရောင်ကို ရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက အောက်ပါခန့်မှန်းချက်များကို ဖတ်ရှုပြီး လှပသောစိတ်ကူးစိတ်သန်းများ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
(၁) မှုန်ပျပျ၊ ခပ်မှိုင်းမှိုင်း အရောင်များ
မှုန်ပျပျဟူသော စကားလုံးမှာ မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များနှင့် စတော့ဈေးကွက်အခြေအနေသတင်းများ ဖတ်ရှုရာတွင် သင်ကြားလိုသော စကားလုံးတစ်ခုမဖြစ်နိုင်ပါ။
သို့ရာတွင် အိမ်သုတ်ဆေးရောင် ရွေးချယ်သည့်ကဏ္ဍတွင်မူ မှုန်ပျပျဖြစ်လေ ကောင်းလေပင်တည်း။
အရောင်အားကောင်း၊ အမှောင်ဘက်လုကာ ရှုပ်ထွေးသည့် အရောင်များဖြစ်သော သစ်အယ်သီးညိုရောင်၊ အနီရင့်မှိုင်းမှိုင်းနှင့် ကျောက်မီးသွေးပြာရောင်တို့မှာ မှုန်ပျပျအရောင်အုပ်စုဝင်များဖြစ်၏။
အဆိုပါအရောင်တို့၏ ကတ္တီပါသွေးဟန်ပန်နှင့် ရှုပ်ထွေးသော အောက်ခံကာလာတုန်းများမှာ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နေကြ အရောင်များတွင် မတွေ့ရချေ။
အိမ်သုတ်ဆေးထုတ်လုပ်သူတို့က ဟောကိန်းထုတ်ထားရာတွင် မှိုင်းပျပျအရောင်များသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၏ အထွန်းတောက်ဆုံး ကြယ်ပွင့်များ ဖြစ်လာမည်ဟု ဆိုသည်။
အဆိုပါအရောင်များသည် စင်များ၊ ဗီရိုများ၊ နံရံများ၊ ရေချိုးခန်းများတွင် အသုံးပြုရန် အလွန်ကောင်းမွန်၏။
စင်များနှင့် ဗီရိုများအတွက် အကောင်းမွန်ဆုံးဆေးရောင်မှာ မီးခိုး ထရောက်ငါးရောင် ဖြစ်သည်။
၂။ သဘာဝ၏ သြဇာလွှမ်းမှုများ
အိမ်သုတ်ဆေး ထုတ်လုပ်သူတို့သည် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အခန်းကဏ္ဍအသီးသီးကို အနီးကပ်လေ့လာ၏။
ဖက်ရှင်လားရာများ၊ ဗိသုကာနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သြဇာလွှမ်းမှုများကို လေ့လာပြီး နှစ်စဉ်အရောင်လားရာ ခန့်မှန်းချက်များ ထုတ်ပြန်လေ့ရှိသည်။
စမတ်ဖုန်းများနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ သုံးစွဲမှုမြင့်တက်ခြင်းကဲ့သို့ အချက်များသည်ပင်လျှင် အရောင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအတွက် မျက်မှောက်ခေတ်လားရာကို သုံးသပ်ရာတွင် ထည့်သွင်းတွက်ချက်သည့် အချက်တစ်ချက် ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် ဆေးကုမ္ပဏီများက တညီတညွှတ်တည်းချမှတ်ခဲ့သည့် ဟောကိန်းမှာ တစ်နေ့တာ ကာလပြီးဆုံးသွားပြီးနောက် အလွန်အကျွံလှုံ့ဆော်ခံရသော မျက်လုံးများကို အနားရစေရန်နှင့် မျှခြေပြန်ညှိပေးရန်အတွက် မိုးကောင်းကင်ကဲ့သို့ ကြည်လင်တည်ငြိမ်သော၊ သဘာဝဖြစ်သော၊ သမုဒ္ဒရာကဲ့သို့ အေးချမ်းသော အရောင်များသည် သုံးစွဲသူများအကြား ကျော်ကြားလာမည်ဟု ဟောကိန်းထုတ်ထားသည်။
သဘာဝတရားကြီးထံသို့ အပြာဖျော့၊ အစိမ်း၊ မီးခိုး၊ အညိုရောင်များဖြင့် ငြိမ်းအေးစွာဦးညွှတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
၃။ နွေးထွေးသော အဖြူများ
အဖြူရောင်သည် အိမ်သုတ်ဆေး ထုတ်လုပ်သူတို့ အများဆုံး ထုတ်လုပ်လေ့ရှိသည့် ပဓာနအရောင် ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ အိမ်သုတ်ဆေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့က အဖြူ၏လားရာကို မည်သို့ခန့်မှန်းထားပါသနည်း။
အရောင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် အဲရစ်က ဝုဖယ်လ်၏ ပြောကြားချက်အရ “အဖြူလင်းလင်း အရောင်အသွေးတွေဟာ အိမ်တွင်းအလှဆင်မှုမှာ လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်နေပြီး နွေးထွေးတဲ့အဖြူမျိုးကိုတော့ တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့ တွေ့နေရပါတယ်”ဟု ဆိုသည်။
Behr ကုမ္ပဏီထုတ် Swiss Coffee အမျိုးအစားနှင့် Antique White တို့ကဲ့သို့ လင်းလက်နွေးထွေးသော အရောင်များလူကြိုက်များနေသည်။
Behr ကုမ္ပဏီထုတ် Polar Bear အရောင်မှာလည်း နာမည်အကျော်ကြားဆုံး အဖြူအမျိုးအစား ဖြစ်လာဖွယ်ရှိနေသည်။
၄။ နွေးထွေးသော ကြားနေအရောင်များ
ကြားနေ ဆေးရောင်များသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း အကျော်ကြားဆုံး ဆေးရောင်များအနက် တစ်ခုဖြစ်လာဖွယ်ရှိသည်ဟုဆိုလျှင် အချို့သူများအနေဖြင့် အံ့အားသင့်ကြဖွယ်ရှိသည်။
သို့ရာတွင် ဆေးထုတ်လုပ်သူတို့က ဟောကိန်းထုတ်ရာတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၏ လာမည့်ကာလများအတွင်း သုံးစွဲသူများ၏ အကြိုက်မှာ နွေးထွေးသော ကြားနေအရောင်များဆီသို့ ဦးတည်ဖွယ်ရှိကြောင်း ခန့်မှန်းထားသည်။
နွေးထွေးသော ကြားနေရောင်များဟူသည် မီးခိုးရောင်များ၊ သိုးမွှေးချည်ကြမ်းရောင်မှ မီးခိုးရောင်အကြားရှိ ကြားရောင်များ၊ ဇော်ဂျီရောင် (သို့မဟုတ်) ဝါညိုရောင် အစရှိသည်တို့ ဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
၅။ ကွဲပြားသော အနက်ရောင်
အိမ်သုတ်ဆေး ထုတ်လုပ်သူတို့၏ အဆိုအရ ၂၀၁၉ တွင် အနက်ရောင် ပြန်လာပြီဟု ဆိုသည်။
အနက်ရောင် ပျောက်ကွယ်သွားပြီဟု အများစုက ယူဆနေကြသည်။
အဖြူ (သို့မဟုတ်) လင်းလက်သော အရောင်များ အသုံးပြုထားသည့် စင်များ၊ ဗီရိုများ၊ အိမ်တွင်း တံခါးများ၊ နံရံများတွင် ဆန့်ကျင်ဘက် အရောင်အနေဖြင့် အနက်ရောင်ကို ထည့်သွင်းပေးခြင်းမှာ အလွန်လှပသည့် စိတ်ကူးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် နေအိမ်တွင် အနက်ရောင်ဖြည့်ထည့်လိုသည့် စိတ်ကူးရှိပြီး အနက်စစ်စစ်သုံးပါက ရိုင်းလွန်းမည်ကို စိုးရိမ်နေသည်ဆိုပါက အနက်ဘက်သို့ လုသည့် မီးခိုး (သို့မဟုတ်) အညိုရောင်မျိုးကို ရွေးချယ်နိုင်၏။
ရှေရီ ( iMyanmarHouse.com အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) မှ အထူးရေးသားဖော်ပြသည်။
Roof Top Bar ဖွင့်မလား? လူနေ/ ရုးံခန်း ? Penthouse အငှါး ( ၆လွှာ ) တစ်လ...
မြရည်နန္ဒာ မြေညီထပ် အငှါး
မြရည်နန္နှာတိုက်ခန်း မြေညီထပ် အရောင်း
258 သိန်း (ကျပ်)